China SCG Vibrating conveyor fanamboarana sy orinasa | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
SCG andiana halavirana avo lenta hafanana avo lenta dia be mpampiasa amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, metallurgy, akora fananganana, arina, indostrian'ny simika, voamaina, fanafody ary indostria hafa. Ny mari-pana dia ambanin'ny 300 ℃ ho an'ny karazana vovo, granular, block ary ny fifangaroany. Izy io dia fitaovana hovitrovitra amin'ny hafanana avo lenta mampita fitaovana miaraka amin'ny fahaizan'ny matanjaka sy ny rafitra mandroso. Ohatra, ny fitaterana akora, ny vokatra semi-vita antonony ary ny vokatra vita ao amin'ny indostrian'ny simenitra, ny fitaterana akora manta sy vokatra semi-vita ao amin'ny indostrian'ny simika, ary ny fitaterana akora, mifantoka ary ny rambony amin'ny fitrandrahana. indostria, sns. Izy io dia karazan-java-mandeha mampita fitaovana miaraka amina universalaly matanjaka sy rafitra mandroso.
1. Izy io dia mety ho fitaterana mihidy tanteraka, manafoana ny fandotoana vovoka, na fitaterana misokatra.
2. Fahaiza-mampita lehibe, effets insulation heat tsara, tsy misy fitaovana fampangatsiahana ary kely ny fanjifana herinaratra.
3. Rafitra tsotra, debugging mora, tsy dia misy karazany ny faritra marefo ary fikojakojana mety.
4. Fanombohana haingana sy fijanonana, fandidiana miorina, fampisehoana mitokana hovitrovitra tsara ary tabataba ambany.
5. Mora ny mametraka azy, tsy misy fototra manokana sy vatofantsika vatofantsika, ary mora mihetsika.
6. Ny halaviran'ny mpampita tokana dia mety hahatratra 20 metatra, ary ny fifandraisana malemy amin'ny milina marobe dia azo hitarina arak'izay ilaina.
7.It dia mety ho famahanana teboka marobe sy famoahana entana, izay mety amin'ny fampitana clinker simenitra sy ny silamo eo amin'ny farany ambany sy eo an-tampon'ny silo.
SCG andian-dahatsoratra lavitra hovitrovitra conveyor dia mampiasa motera roa hovitrovitra ho loharanom-pihoviana. Amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny fampitambarana tena, ny motera mihetsiketsika roa dia mihodina amin'ny làlan-kizorana mba hahatonga ny fifandanjana eo amin'ny farany ambany amin'ny mpampita mampisy tadin-dokotra. Amin'ny alàlan'ny hetsiky ny lohataona hovitrovitra lehibe sy ny lohataona lozisialy fitarihana, dia mihetsiketsika ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny lohataona ambony mba hahatratrarana ny tanjon'ny fampitana fitaovana. Conveyor hovitrovitra lavitra SCG dia manana karazany roa: karazana misokatra sy karazana mihidy. Ny faritra ampitan'ny trough material dia azo atao boribory, mahitsizoro ary trapezoid. Ny famahanana sy ny famoahana ny sombin-tsolika dia azo atao isan-karazany koa, toy ny fanomezana isa iray, fanalefahana teboka iray, famahanana teboka iray ary famoahana teboka marobe, famahanana teboka marobe ary famoahana teboka iray, sns. dia lava, conveyors maro azo ampifandraisina amin'ny fampitana. Ny lohan'ny conveyor hovitrovitra lavitra SCG dia tohanan'ny lohataona na lohataona vy, ary afaka mamokatra hovitrovitra amin'ny alàlan'ny fiankinan-doha amin'ny fiasan-doha mitovy amin'ny motera hovitrovitra roa miorina amin'ny chute.
Previous: Mpitafa visy
Mpanatitra Scraper nalevina
Mpanamboatra mpanera Scraper
Mpanadidy rojika tokana